Office Application – Afထgy Platform
Course Category: Office Application
Coursadani waxaa ku baranayna barnaamijka xisaabaadka ee Microsoft Excel. Yaa u Baahan Koorsadaani? Hada tahay arday oo aa qarayso research ama baxthi. Hada tahay maamule aa fadhiso xafiis Hada tahay ganacsade oo mehradaadi jogtid. intaas iyo inkabadan ayaa barnaamijkani u baahan. Maxaa Ku baranayna Korsadaani? Wajiga hore barnamijka guud ahaan iyo toolskiisa sidaa u adeegsan …
Maxay tahay Koorsadaani? Coursadani waxaa ku baranayna barnaamijka lagu qorto documentska Microsoft Word. Yaa u Baahan Koorsadaani? Hada tahay arday oo aa qarayso research ama baxthi. Hada tahay maamule aa fadhiso xafiis Hada tahay ganacsade oo mehradaadi jogtid. intaas iyo inkabadan ayaa barnaamijkani u baahan. Maxaa Ku baranayna Korsadaani? Wajiga hore barnamijka guud ahaan …